वृद्ध राई : एउटा खोपका लागि पाँच घण्टाको सङ्घर्ष ! « Nepal Bahas
वृद्ध राई : एउटा खोपका लागि पाँच घण्टाको सङ्घर्ष !
प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७८, बुधबार ०९:१२
समयमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नपाएपछि स्वास्थ्य कार्यालय परिसरमा घर फर्कने सल्लाह गर्दै फिदिम–१ दुमाका ७७ वर्षीय रामकुमार राई र ७८ वर्षीय श्रीभक्त राई । तस्वीर : रवीन्द्र काफ्ले÷ रासस
रवीन्द्र काफ्ले/ रासस
२० साउन, फिदिम । कोभिड–१९ दोस्रो लहर जिल्लामा फैलनुअघि नै ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा अत्यावश्यक सेवाका व्यक्तिहरुलाई कोभिशिल्ड खोप दिन थालिएको थियो । दोस्रो डोज नआए पनि १३ हजारभन्दा बढीले कोभिशिल्ड खोप लगाए जिल्लामा ।
त्यसपछि आउन थाल्यो भेरोसेल । यस पटकसम्म तीनपटक भेरोसेल खोप लगाउने अभियान चलिसक्यो । यस क्रममा ६० वर्षका नागरिकदेखि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायतले यो खोप पाए तर कतिपयले खोप लगाउन वास्ता गरेनन् । कसैले अफवाहका पछि लागेर खोप लगाउन मानेनन् । कतिपयले खोप लगाउन पाउने कुराको जानकारी नै पाएनन् ।
गाउँभरि मान्छेहरु बिरामी पर्ने, सामान्य औषधिसमेत नपाइने र कोभिड–१९ संक्रमणको महामारीले आतङ्कको स्वरूप लिएपछि मानिसहरु थोरै भए पनि सचेत हुनेतर्फ लागे ।
दोस्रो लहरले ल्याएको आतङ्कले आम मानिसमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनै पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दियो । त्यही कारण खोप केन्द्रहरुमा मानिसहरुको भीड लाग्न थाल्यो । गएको शनिबारदेखि मंगलबारसम्म चलाइएको भेरोसेल खोप दिने अभियानमा ठूलै भीडभाड देखिए तर यही भीडभित्र बेथितिसँग मौन आन्दोलन गर्दै गर्दा भेटिए ७७ वर्षीय रामकुमार राई । धेरै टाढा त होइन, फिदिम नगरपालिका–१ दुमाका रामकुमारले ‘खोप लगाए कोरोना लागिहाले पनि धेरै गाह्रो पर्दैन’ भन्ने सुनेका रहेछन् ।
सोमबार दिउँसो करिब २ बजे स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरमा खोप लगाउँदै गरेको स्थान छेउ अन्य ज्येष्ठ नागरिकसँग भेटिए उनी । बिहान ११ बजेतिर खोप केन्द्र आई नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएका राईले समयमै खोप पाइएला र लगाउँला भन्ने सोचेका रहेछन् तर पालो नआएपछि कतै पालो आइहाल्ला कि भनेर ८७ वर्षीय छिमेकी श्रीभक्त राईसँगै उनी कहिले खोप लगाएको ठाउँ पुगे त कहिले खोप कार्ड वितरण भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयको ढोकाअघि ।
“अघि ११–१२ बजेतिर आएको थिएँ । नागरिकता पनि बुझाएको छु । पानी पर्न आँटिसक्यो । हाम्रो पालो आउँदैन रे ?”, यहाँ आएको कति समय भो भन्ने प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै राईले भने “अहिले आउँदै गरेको मान्छेहरु सुई हानेर गइसके । हाम्रो पालो किन आएन ? बुझिदिनुस् न ।”
पानी परिरहने, घर जाने बाटोमा छेउभित्ता खसिरहने डरले राईको मन घरैमा पुगिसकेको थियो । उनी घरी घर हिँडिहाल्न खोजेर स्वास्थ्य कार्यालयको गेटमा पुगे त घरी भीडको पछिल्तिर आएर नाम आइहाल्ला कि भनेर सुने गरे तर ११ बजेदेखि ३ः४५ बजेसम्म बस्दासमेत उनको पालो आएन ।
हुन् त उनको पालो आओस् पनि कसरी ? उनको नाम कागजमा टिपेर सुटुक्क भित्र पु¥याई खोप कार्डमा नाम लेखेर बाहिर ल्याइदिने कोही थिएन । उनले चिनेको न ठूलो मान्छे थियो, न ठूलाहरुले उनलाई नै चिन्थे । चाउरी परे पनि उज्यालो अनुहार भएको, कपाल ढाकेर ढाका टोपी लगाएको, मुख छोपेर मास्क लगाएको, दौरा सुरुवाल र इस्टकोट लगाएको, एक हातमा पाइप र बाँस जोडेर बनाएको लौरो टेकेको, अर्को हातले छाता च्यापेको, प्लाष्टिकको जुत्ता लगाएको खोपको एक असली हकदारलाई चिन्न न त्यहाँ जनप्रतिनिधि थिए, न कर्मचारी । गर्मी र भीडले निस्सासिएर ड्युटी गरिरहेका प्रहरीले त्यस्तो ख्याल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अरूलाई त कसरी आफन्त, घरपरिवार, पार्टी र गुटका मान्छेलाई खोप दिने भन्ने चिन्ता थियो ।
सुरुमा बूढापाकाले खोप पाउने हो भन्ने सुनेका उनी सबै आशा मरेपछि “नागरिकता फिर्ता पाइयो भने घर लाग्छु” भन्दै स्वास्थ्य कार्यालयको ढोकाअघि भुईंमा बस्नु भयो । उनीसँगै थिए श्रीभक्त राई, श्रीभक्तकी श्रीमती, फिदिम–४ का पदमबहादुर चौहानलगायत आठ–दशजना ज्येष्ठ नागरिक ।
समयमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नपाएपछि स्वास्थ्य कार्यालय परिसरको ढोकाअगाडि बसेका फिदिमका ज्येष्ठ नागरिक । तस्वीर रवीन्द्र काफ्ले- रासस
खोप सकियो भन्ने सुनेपछि रामकुमार राईसहितका ज्येष्ठ नागरिकहरु नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता खोज्दै थिए । यत्तिकैमा फिदिमका युवाहरुको समूहले आपत्ति जनायो । “घण्टौँदेखि ढोकामा बसेका बा–आमालाई कसरी खोप दिँदैनौ हेरौँ त १” बाहिर आवाज उठ्यो । न मापदण्ड र उमेर समूह नै । पहुँचका आधारमा खोप वितरण गर्नेहरुका पसिना अब भने छुटे । हस्याङफस्याङ रामकुमार, श्रीभक्त, पदमबहादुरसहितका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई खोप दिइयो । अब त ज्येष्ठ नागरिकहरुले न पालो पर्खनु प¥यो, न लाइन नै लाग्नु । “बाबु अन्तिममै भए पनि सुई लगाउन पाएँ”, खोप लगाएपछि रामकुमारले भने “पानी झर्न लाग्यो । हामी चाहिँँ लाग्यौँ है ।”
पछिल्लो २४ घन्टामा नौ सय ५३ जना कोरोना संक्रमित